450W na-edu egwuregwu egwuregwu gburugburu ọkụ China Manufacturer
Nkọwa:Egwuregwu Ngwá Egwuregwu Egwuregwu,Mmiri Iju Mmiri,Led Football Light Fixtures
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu egwu > Egwuregwu Egwuregwu Football > 450W na-edu egwuregwu egwuregwu gburugburu ọkụ
Na-agbanwe ihe ọkụkụ ọdịnala na-adịghị arụ ọrụ nke nwere mmemme 104000lm na 800W n'èzí Egwuregwu nke Ìhè , ị nwere ike belata ego eletrik gị ruo 80%. The Lifespan anyị Soccer Field Ìhè dị n'elu 50000 awa. The Sports Field Lighting 800w eji anwụ-nēfe aluminum na magburu onwe okpomọkụ dissipation, iji hụ na ikanam na ọkwọ ụgbọala ogologo na-adịgide adịgide lifespan.This P ortable Stadium Ìhè bụ IP65 Mmiri mmiri maka ọnọdụ mmiri na ọnọdụ ọjọọ. Nke a S Tadium Light Fitting ga - enwe ihe mgbakwasị ụkwụ yoke nke nwere ike idowe n'ọnọdụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'akụkụ ọ bụla n'ọtụtụ ọnọdụ.
The 800W L ed Sports Lighting Fixtures dị mma maka stadiums, square, billboards, mpempe ụgbọala, mgbidi mpụga ụlọ, ụlọ egwuregwu, ebe ime obodo, ubi, ebe ndị gbara ọchịchịrị, wdg.
Anyị na-ewepụ ihe ize ndụ ahụ iji hụ na afọ ojuju afọ afọ ọ bụla ị nwetara.Bbier pụtara na anyị nwetara gị! A na-enye nfe ngwa ngwa na ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla metụtara okwu gbasara oghere S anyị .
Egwuregwu Ngwá Egwuregwu Egwuregwu Mmiri Iju Mmiri Led Football Light Fixtures Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Led Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu 600W Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Cricket Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Football